မူလစာမျက်နှာ - နိုင်ငံတော်သို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ
Fr. နှင့် Virtual ဆုတ်ခွာ Michel Rodrigue
(1 သက်သာလောနိတ် 5: 20-21)
နောက်ဆုံးတမန်တော်သေဆုံးပြီးနောက်အများပြည်သူဆိုင်ရာဗျာဒိတ်ကျမ်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကယ်တင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအရာအားလုံးကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်စကားပြောဆိုခြင်းကိုမရပ်တန့်သေးပါ။ The ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ဓမ်မပုစ်ဆာ “ ဗျာဒိတ်ကျမ်းပြီးဆုံးလျှင်ပင်၎င်းသည်လုံးဝရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမဖော်ပြနိုင်ပါ။ ရာစုနှစ်များတစ်လျှောက်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသည်၎င်း၏အပြည့်အ ၀ အဓိပ္ပာယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်ရန်ကျန်ရှိတော့သည်။ ” (n ၆၆) ။ ပရောဖက်ပြုချက်သည်ဘုရား၏ထာဝရအသံဖြစ်ပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းကို“ ပရောဖက်များ” ဟုခေါ်ဝေါ်သောမိမိ၏တမန်များမှတဆင့် ဆက်၍ စကားပြောဆိုသည် (၁ ကော ၁၂း၂၈) ။ ဘုရားသခင်ပြောတာကအရေးမကြီးဘူးလား။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းထိုသို့မထင်ကြပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်အသံများကိုခွဲခြားသိမြင်စေသောနေရာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကြွလာခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောကြောင့်ဘုရားကျောင်းသည်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကိုအမှောင်ထဲတွင်အလင်းလိုသည်ထက်ပိုပြီးလိုအပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ခွင | ပုဂ္ဂလိကဗျာဒိတ်တော်နှင့်နှိုင်းယှဉ်အများပြည်သူ | ဘာသာပြန်ချက်ရှင်းလင်းချက်
အဘယ်ကြောင့် Edson Glauber?
ဘာကြောင့် Fr. Michel Rodrigue? တစ် ဦး က Virtual ဆုတ်ခွာနေ
အဘယ်ကြောင့် Eduardo Ferreira?
အဘယ်ကြောင့် Alicja Lenczewska?
အဘယ်ကြောင့်ခမညျးတျော Stefano Gobbi?
အဘယ်ကြောင့် Elizabeth လိရှဗက် Kindelmann?
အဘယ်ကြောင့် Gisella Cardia?
အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ကျွန် Luisa Piccarreta?
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Medjugorje ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏အမြော်အမြင်?
ဘာကြောင့် Pedro Regis?
အဘယ်ကြောင့် Simona နှင့် Angela?
အဘယ်ကြောင့် Luz de Maria က de Bonilla?
အဘယ်ကြောင့် Valeria Copponi?
ကျမ်းချက် - အာဏာရှင် နိဂုံးချုပ်သောအခါ
... ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် တရားမျှတမှု စိုးမိုးလိမ့်မည်။
Valeria - ဤနောက်ဆုံးအချိန်များတွင်
... ငါ မင်းနဲ့ ပိုနီးနေလိမ့်မယ်။
Gisella - ငါ့နာကျင်မှုက ပိုပြင်းထန်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုအပ်သော ဆက်ဆံရေးအကူအညီ။ "ဆက်ဆံရေးဆရာဝန်" Christine Bacon နှင့် အပိုင်း ၂။
အံ့ဖွယ်အမှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ် - အပိုင်း ၁။ SACRED ဆိုသည်မှာ မည်ကဲ့သို့ မြင့်မြတ်သည်ကို လေ့လာပါ။
တောက်ပသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်များ (ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မျှဝေပါ။) Fr နှင့် NATIONAL 54 DAY ROSARY NOVENA Blount နှင့်ခရစ်ယာန်
လတ်တလော Podcasts တွေကို
သတိပေးခြင်း၊ Reprieve နှင့်အံ့ဖွယ်အမှု
နက်နဲသောအရာများစွာသည်မြေကြီးပေါ်ကျရောက်မည့်ကြီးစွာသောဒုက္ခကာလအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ လူအများစုကယင်းကိုမုန်တိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြသည် ဟာရီကိန်းလိုပဲ
Full Timeline ကိုဖတ်ပါ
သမ္မာကျမ်းစာသမိုင်း၌လူသားတို့၏ဘဝလမ်းစဉ်ကိုပြောင်းလဲစေသောအဓိကသမိုင်းဖြစ်ရပ်များသည်“ မတိုင်မီ” နှင့်“ နောက်” ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာငါတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ လူအများစုကအဲဒါကိုမသိကြဘူး။
လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နောက်ကွယ်မှသတိပေးမှုနှင့်အံ့ဖွယ်အမှုများနှင့်အတူ“ ကရုဏာတံခါး” ကိုဖြတ်ကျော်ရန်ငြင်းဆန်သူများသည်ယခုအခါ“ တရားမျှတမှုတံခါး” ကိုဖြတ်ကျော်ရမည်။
မြင့်မြတ်သောထုံးတမ်းစဉ်လာအရခေတ်ကာလကုန်ဆုံးသောအခါစိန့်ပေါလ်က“ တရားမဲ့သောသူ” ဟုခေါ်ဝေါ်သူတစ် ဦး သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ခရစ်တော်အားမှားယွင်းသောသူတစ် ဦး အဖြစ်ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပြီး ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ဤကမ္ဘာကြီးသည်ပရဒိသုဥယျာဉ်မှ စ၍ တွေ့ဖူးသမျှတွင်အထူးခြားဆုံးသောရွှေခေတ်ကိုမကြာမီကြုံတွေ့ရတော့မည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်း၊ ကောင်းကင်၌အလိုတော်ပြည့်စုံသကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်တွင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
တခါတရံ 'ဒုတိယအခြင်း' သည်ခရစ်တော်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ မြင်နိုင်သောနှင့်ပကတိအချိန်အဆုံးတွင် - ဇာတိပကတိကြွလာခြင်း - သတိပေးခြင်း၊ ခေတ်သစ်စသည်တို့နှင့်ကွဲပြားသောအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ရပ်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ နောင်လာလတ္တံ့သောသူသည်နောက်ဆုံးသောကာလနှင့်ထာဝရရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
Big Tech ကကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ပြီးသင်ဆက်ပြီးဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဘယ်တော့မှမျှဝေမှာမဟုတ်သည့်သင်၏လိပ်စာကိုလည်းထည့်ပါ။
MTS, LCSW၊ ကက်သလစ်စကားပြောသူ၊ အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာ၊ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် Queen of Peace Media ကိုတည်ထောင်သူ။
ကက်သလစ်စာရေးဆရာ၊ ဘလော့ဂါ၊ စပီကာနှင့်အဆိုတော် / သီချင်းရေးသူ။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် Privacy မူဝါဒ
Website မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည် နေပြည်တော် © 2021
ကက်သလစ်တွေးခေါ်သူများအနေဖြင့်ခေတ်ပြိုင်ဘဝ၏ ၀ မ်းမြောက်ဖွယ်ဒြပ်စင်များကိုနက်နက်နဲနဲလေ့လာရန်တွန့်ဆုတ်နေသောတွန့်ဆုတ်ခြင်းသည်သူတို့ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားသည့်ပြproblemနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများ (သို့) နတ်မင်းကြီး၏လှည့်စားခြင်းခံနေရသောသူများအတွက် Apocalyptic စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအများစုကိုချန်ထားခဲ့လျှင်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးလုံးသည်အလွန်ပင်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည်။ ထိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလူ့စိတ်ဝိညာဉ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ –Ahorhor, Michael D. O'Brien၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Apocalyptic Times တွင်နေထိုင်နေကြပါသလော။
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်နေစဉ်စာဖတ်သူများအားလုံးသည်သူတို့၏အဓိကအချက်များဖြစ်သောအောက်ပါအချက်ခြောက်ချက်ကိုသတိပြုရန်လိုပါသည်။
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ချက်ဖြစ်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏နောက်ဆုံးခုံသမာဓိလူကြီးများမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သူမပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ချသမျှကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းတင်ပြပါမည်။ ဟုတ်တယ် နှင့် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရောဖက်ပြုချက်ကို“ စမ်းသပ်” ရန်အသင်းတော်၊ဘုရားကျောင်းများ၏ Magisterium, အလမ်းပြ sensus fidelium ဖြစ်သည် ခရစ်တော်၏စစ်မှန်သောခေါ်တော်မူချက်ဖြစ်သည့်အသင်းတော်သို့စစ်မှန်သောခေါ်ဆိုမှုဖြစ်စေသည့်ဤဗျာဒိတ်တော်များတွင်ပိုင်းခြား။ မည်သို့ကြိုဆိုရမည်ကိုသိသည်။ ” (ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ဎ။ ၆၇)
(၂) ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုအကြားခွဲခြားမှုကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေးစားစွာလေးစားတန်ဖိုးထားကြသည်။ ဤတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှသစ္စာရှိသူများနှင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်တောင်းဆိုခြင်းမပြုပါ။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းထားသောဗျာဒိတ်တော်များကိုပိုင်းခြား။ ဆက်စပ်သောနောက်ထပ်တိုးတက်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤနေရာတွင်ဖွင့်ဆိုချက်တိုင်း၌အကြွင်းမဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုအခိုင်အမာတောင်းခံခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ဤနေရာတွင်ဖြန့်ချိရန်အရေးကြီးသည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသော်လည်း၊ ဤ site ၏အကြောင်းအရာ၏အတိုင်းအတာသည်ပင်ကိုယ်ကန့်သတ်ထားပြီး၎င်း၏စာမျက်နှာများမှပေးထားသောပရောဖက်မရှိခြင်းမှဘာကိုမှကောက်ချက်ချသင့်သည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သီးသန့်ဖွင့်ဟချက်တစ်ခုချင်းစီကိုအမှန်တကယ်အလေးအနက်ထားသည်မှန်သော်လည်းပိုင်းခြားသိမြင်မှုအတွက်ဘုရားကျောင်းမှချမှတ်ထားသောစံနှုန်းများကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သူဖြစ်ပါက (ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်) ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ)၊ နောက်ဆုံးမှာငါတို့ဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းမျိုးစုံရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကွဲပြားမှုကနေသူ့ဘာသာသူပေါ်ထွက်လာတာ၊ ယုံမှားသံသယနှစ်ခုရဲ့စစ်မှန်မှုအပေါ်မကျရောက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခေါ်ဆိုမှုကိုဖြစ်စေတယ်။
၅။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသီးသန့်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုပင်ဘုရားကျောင်းသြဝါဒအတိုင်းဆက်ဆံရမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် St. Hannibal ၏ပညာကိုလက်ခံသည် -“ သမ္မာသတိနှင့်မြင့်မြတ်တိကျမှုတို့နှင့်အညီလူများသည်သန့်ရှင်းသောကျမ်း (သို့) နိဿယအမိန့်များကဲ့သို့သီးသန့်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုမကိုင်တွယ်နိုင်ပါ။ ” (Fr. Peter Bergamaschi ထံပေးစာ)
၆။ ပရောဖက်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတူရိယာများဖြစ်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်“ ဘုရားသခင်ထုတ်ဖော်ပြသသောအရာအားလုံးသည်ဘာသာရပ်၏သဘောဆန္ဒများနှင့်အညီရရှိသည်။ ပရောဖက်ပြုချက်ဖော်ထုတ်ခြင်းသမိုင်း၌ပရောဖက်၏ကန့်သတ်ချက်နှင့်မစုံလင်သောလူ့သဘောသဘာဝသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ် ၀ ိညာဉ်ရေးရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုခုကြောင့်ပရောဖက်၏ခံယူချက်ကိုပြည့်စုံတောက်ပစေသည်။ ဖော်ထုတ်ချက်သည်အလိုအလျောက်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ” (သတင်းလွှာ, သန့်ရှင်းသောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏သာသနာပြုများ, ဇန်နဝါရီ - မေလ 2014) ။ ထို့ကြောင့်၊ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်မြင်သူပြောသည့်သို့မဟုတ်ရေးသားထားသောအရာအားလုံး၏ထောက်ခံချက်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့တင်ထားတာကိုသာစဉ်းစားပါ ဒီမှာ အထက်ပါစံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံသည်။
ခေတ်ကာလတိုင်း၌ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ကြိုတင်ဟောကြားချက်ကိုခံယူခဲ့သည်။ —Cardinal Ratzinger (Benedict XVI)၊ Fatima ၏သတင်းစကား, ဘာသာရေးဝေဖန်သုံးသပ်ချက်, www.vatican.va
ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှင့်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သောစိတ်နှင့်နားထောင်ရန်ဘုရားသခင်၏မိခင်၏သတိပေးချက်များကိုနားထောင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ရောမပုပ်ရဟန်းမင်းများ။ အကယ်၍ သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာတွင်ပါ ၀ င်သောဘုရားသခင့်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုအုပ်ထိန်းသူများနှင့်စကားပြန်များထည့်သွင်းထားပါက၎င်းတို့ကိုလည်းယူဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ သစ္စာရှိသူများ၏အာရုံကိုအကြံပေးရန်တာ ၀ န်အနေနှင့်တာ ၀ န်ခံစာမေးပွဲပြီးသည့်နောက်သူတို့သည်အများအကျိုးအတွက်ဘုရားသခင့်အလိုတော်နှင့်ညီသောအခွင့်ထူးခံလူအချို့အားလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဝေရန်အယူဝါဒအသစ်များအတွက်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမူအကျင့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြ။ —Saint Pope John XXIII, ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ သည် L'Osservatore Romano
သူတို့ထံမှဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းနှင့်၎င်းသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းမည်သူသေချာသနည်း။ အဖြေသည်အပြုသဘောဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ကြေငြာခြင်းခံရသောသူသည်လုံလောက်သောအထောက်အထားများအရသူအားအဆိုပြုပါကဘုရားသခင်၏မိန့်မှာချက်သို့မဟုတ်သတင်းစကားကို ယုံကြည်၍ နာခံသင့်သည်။ အခြား၏, ထို့ကြောင့်ယုံကြည်ဖို့သူ့ကိုလိုအပ်; ထို့ကြောင့်သူသည်၎င်းကိုယုံကြည်စေရန်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်။ —Pope Benedict XIV၊ သူရဲကောင်းပီသသော သီလ, Vol III ကို, p.390
ဤလောကသို့ ၀ င်ရောက်လာသောသူများသည်အဝေးမှကြည့်။ သူတို့၏ညီအစ်မများ၏ပရောဖက်ပြုချက်ကိုငြင်းပယ်သည်။ —Pope Francis, Evangelii Gaudium ဖြစ်သည်, n ။ ၉၇
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုနာခံသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီး၊ “ သီးသန့်ဖွင့်ပြခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုသည့်အရာကိုကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့အချိန်၌ဘုရားသခင့်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် ပိုမို၍ အပြည့်အဝအသက်ရှင်ရန်ကူညီရန်ကောင်းကင်မှပေးပို့သောပရောဖက်ပြုချက်သတင်းများဖြစ်သည်။ “ သီးသန့်” ဖွင့်ပြခြင်းကိုဘုရားသခင်ကတစ်ကမ္ဘာလုံးပျံ့နှံ့စေရန်နှင့်လက်ခံရန်မကြာခဏဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည်“ သီးသန့်ဖြစ်ရန်” ခဲယဉ်းသည်။ “ သီးသန့်” ဖွင့်ပြချက်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Lady မှ St. Dominic အားပုတီးသီးပေးသည်။ ပထမစနေနေ့များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဖာတီမာ၏အမေထံမှသတိပေးခြင်း။ လူများအားဘုရားသခင်အား ဆက်၍ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်း၊ ခရစ်တော်၏ဘုရားသခင့်ကရုဏာတော်တနင်္ဂနွေနှင့်စိန့်ဖော့စတီးယန်းကိုဗာလ်စကာအားဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်ကရုဏာတော်ဆိုင်ရာလက်ကမ်းစာစောင်အားလူအနည်းငယ်မှသာဖော်ပြရန်၊ ပုဂ္ဂလိကဖွင့်ဟချက်အားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲလျစ်လျူရှုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသခင်ယေရှုကိုလျစ်လျူရှုရန်အလွန်အန္တရာယ်ရှိသည်။
“ သီးသန့်” ဟူသောစကားလုံးသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာဖွင့်ဟချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ကောင်းကင်မှဤသို့သောပရောဖက်ပြုချက်ဆိုင်ရာဖွင့်ဆိုချက်ကိုရည်ညွှန်းထားသည် Fidei Depositum (ယုံကြည်ချက်အပ်နှံခြင်း) - ကျမ်းစာနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာကိုစာသင်ကျောင်းများမှအတတ်နိုင်ဆုံးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ဒီလူသိရှင်ကြားဖွင့်ပြချက်မှာကျွန်ုပ်တို့မှာခိုင်မာတဲ့အုတ်မြစ်တစ်ခုရှိတယ်။ အမြဲတမ်းလုံခြုံစွာမတ်တပ်ရပ်နိုင်၊ ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ချောက်ထဲကနေကျွန်ုပ်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ခိုင်မာသောအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိတယ်။ အများပြည်သူဆိုင်ရာဖွင့်ဟချက်များ၏ပါ ၀ င်မှုတစ်ခုတည်းကတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ ိညာဉ်တော်၏မြင့်မြတ်သောယုံကြည်ခြင်းကို (သဘာဝလွန်သီလတစ်ခုအနေဖြင့်) လက်ခံရန်တောင်းဆိုထားသည်။ အမှန်မှာဤအများပြည်သူဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ချက်တွင်ပါ ၀ င်သမျှသည်အမှန်ပင်ဖြစ်သည် အကြွင်းမဲ့ သေချာတယ်၊ ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်သမျှ အကြွင်းမဲ့ မှားယွင်းသောအရာ၊ အချိန်ကာလကုန်ဆုံးသည်အထိအများပြည်သူဆိုင်ရာဖွင့်ဟချက်အသစ်များရှိလိမ့်မည်မဟုတ်။
သို့သော်သင်သည်ယခုပြီးပြီဟုမယူမှတ်ပါနှင့်။ ကက်သလစ်ချာ့ချ်၏ကက်သလစ်ဘာသာကဤသို့ဆိုသည် -
“ ခရစ်တော်၏ဖွင့်ပြထားသောဖွင့်ဟချက်ကိုတိုးတက်စေရန် (သို့) ဖြည့်စွက်ရန် [ပုဂ္ဂလိက 'ဖွင့်ဟချက်များ'] သည်အခန်းကဏ္ is မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၎င်းနှင့်အပြည့်အဝရှင်သန်နိုင်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်းများ၏ magisterium, အလမ်းပြ သန်းခေါင်စာရင်း fidelium ခရစ်တော်နှင့်သူ၏သူတော်စင်များ၏ချာ့ချ်ကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ဆိုသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဤဖွင့်ဟဖော်ထုတ်မှုများတွင်မည်သို့ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သည်ကိုသိသည်။ ။ ။ " (§ ၆၇)
သူပြောသမျှ၊ လုပ်လေသမျှမှာလူသည်မိမိသိသောအရာကိုမှန်ကန်စွာ၊ မှန်ကန်စွာလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ (§၁၇၇၈)
ကက်သလစ်ချာ့ချ်၏ကက်သလစ်ဘာသာတရားကထိုသို့ပြုသည် မဟုတ် ပြောပါ -“ လူသည်အများပြည်သူဖွင့်ဟသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တိကျစွာဖော်ပြသောထိုအမှန်တရားများကိုသစ္စာရှိစွာလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။ ” သို့သော်ချာ့ချ်သွန်သင်ချက်၏ဤသိမ်မွေ့လှသောအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုမှာကောင်းကင်ဘုံ၏အရေးတကြီးသတင်းစကားများကိုဝေငှသည့်အခါတိုင်းကက်သလစ်အသိုင်းအဝိုင်းများတွင်တစ်ခါတစ်ရံကြားရသောအရာများဖြစ်သည်။ “ အိုး၊ ဒါကသီးသန့်ဖွင့်ပြချက်ပဲ။ Pshh! ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်သည်ဟုခံစားရသည်မည်သို့တုံ့ပြန်မည်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤလှည့်စားခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုလိုက်နာရန်နှင့် ၀ ိညာဉ်တော်၏အသံကိုလိုက်နာရန်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောတာ ၀ န်ကိုဆိုလိုသည်။ အမြဲ၎င်းတွင်ကောင်းကင်၏ညွှန်ကြားချက်များ၊ ကောင်းချီးများ၊ သတိပေးချက်များနှင့်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများပါ ၀ င်သည်။ အမှန်တရားအချို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၏သိုက်ကိုရှင်းလင်းစွာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်တန်ဖိုးတစ်ခုအားမည်သည့်အချိန်ကဖယ်ထုတ်ပစ်သနည်း။ ယင်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်တုံ့ပြန်ရန်တာဝန်ရှိသည်၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာနှင့်အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုမဆိုကက်သလစ်တစ် ဦး အားအဘယ်ကြောင့်ကာကွယ်ပေးသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရဲရင့်သောစိတ်နှင့်နှလုံးသားကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းအားဖြင့်သတ္တိရှိရှိ၊ ရဲရင့်စွာရှေ့သို့ချီတက်ရန်မသွားပါကကောင်းကင်မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့်မှန်သည်မှန်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောလူသားများပင်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောလူသားများမဟုတ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စစ်မှန်သောကက်သလစ်များမဖြစ်နိုင်ပါ။ စကားလုံးတစ်လုံးအားဖြင့်အများပြည်သူဖွင့်ပြခြင်းသည်လူတို့၏ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်လွတ်လပ်မှုကိုလျော့ပါးစေရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းမဟုတ်ပါ; ဒါကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးရဲတိုက်ဖို့ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းသောထုံးတမ်းစဉ်လာမှတဆင့်ကြီးထွားလာပြီးအတိအလင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရကျွန်ုပ်တို့၏ချစ်သူသူငယ်ချင်းများ၊ အများပြည်သူဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိနေသောဤမအောင်မြင်သောအုတ်မြစ်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာရပ်တည်ပါ။ ကော်မရှင်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ပျက်ကွက်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေဤအတွေးအခေါ်များကို (အတွေး၊ စကား၊ အပြုအမူအားဖြင့်) ဤအုတ်မြစ်များနှင့်မဆန့်ကျင်ပါစေနှင့်။ သို့သော်ဖောင်ဒေးရှင်းသည်သင့်အားပိုမိုမြင့်မားသောတောင်တက်ခြင်းများမှတားဆီးခြင်းမှခွင့်မပြုပါနှင့်။
Heaven ပြောသောအခါ၎င်းသည်အရေးကြီးသည်။ ထိုအခါကောင်းကင်ဘုံသည်သမိုင်းမှာဘယ်တော့မှအရင်ကမတူပဲယနေ့ငါတို့ကိုခေါ်နေသည်။ တစ်ခုခုလာနေပြီ သမိုင်း၌တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသောအရာတစ်ခုခု သမိုင်းကိုယ်နှိုက်က၎င်း၏သရဖူအဖြစ်တောင်းဆိုသောအရာ။ ကောင်းကင်ကမင်းကိုစကားပြောနေတယ်
ပိုမိုသိရှိလိုပါကအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စာမျက်နှာ ၄၈-၆၉ တွင်ကြည့်ပါ Sanctity ၏သရဖူ နှင့်စစ။ ၏ 93-95 သမိုင်း၏သရဖူ ဒံယေလ O'Connor ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Mark Mallett မှအောက်ပါအချက်များကိုလည်းကြည့်ပါ ယခုစကားလုံး:
သီးသန့်ဗျာဒိတ်တော်ကိုသင်လျစ်လျူရှုနိုင်သလော \_ t
အကယ်၍ သင်သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏မူလစာမျက်နှာမှဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာကိုဖတ်ရှုနေပါကဘာသာပြန်တွင်အမှားအယွင်းများရှိနိုင်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။